I-Cosatu yeseka uRamaphosa kwesikaMengameli we-ANC | News24
I-Cosatu yeseka uRamaphosa kwesikaMengameli we-ANC
Johannesburg – Umfelandawonye wezinyunyana zabasebenzi, iCosatu, usuphumele obala waseka uSekela Mengameli, uCyril Ramaphosa, ukuba athathe izintambo zokuba nguMengameli olandelayo wenhlangano ebusayo, i-ANC.
“Ngemuva kwenkulumompikiswano ebiqinile futhi ebishubile, i-CEC [Central Executive Committee] inqume ukweseka ukukhankasela nokunxenxa ukuthi uSekela Mengameli we-ANC, uComrade Cyril Ramaphosa, athathe izintambo njengomengameli olandelayo we-ANC,” uNobhala Jikelele weCosatu, uBheki Ntshalintshali, utshele izintatheli esithangamini sabezindaba ngoLwesine.
Lo mfelandawonye wezinyunyana zabasebenzi ufuna i-ANC igweme ingqungquthela yokukhetha ubuholi enombango ngonyaka ozayo.
Njengamanje uRamaphosa unguSekela Mengameli wezwe aphinde abe nguSekela Mengameli we-ANC.
Uma egcina eqokwe njengoMengameli waleli qembu elibusayo angaba sethubeni lokuthi agcine enguMengameli wezwe ngonyaka ka-2019 uma i-ANC inqoba ukhetho lukazwelonke.
Lesi sitatimende seCosatu siza njengoba lilokhu likhule njalo ikhwela lezinhlangano ezihlukene, okubalwa namanye amalungu e-ANC, anxusa ukuba uMengameli Jacob Zuma ehle esihlalweni njengoMengameli wezwe.